Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Febroary 2010
Febroary 2020 43 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny Febroary, 2010
Araka ny fitantaran'nyNew York Times vao haingana ilay nolazaina ho ‘Operation Aurora’, izay namely ny Google sy ireo vondronorinasa tandrefana 33 farafahakeliny dia noheverina ho niainga avy tamina Anjerimanontolo Shinoa. Ny iray amin'ireo ‘Anjerimanontolo’ ireo raha ny tena marina dia sekoly fampianarana asa mampalahelo kely sokajy fahaefatra any avaratr'i Shina....
Japan: Eritreritra manodidina ny fahelana velona
Amin'ny maha-firenena mora antitra azy indrindra manerana izao tontolo izao ankoatra ny fananany taha-pahavelomana avo indrindra, Mila mieritreritra momba ny hatsaram-piainana sy fiaraha-monina mahatsangy no ary indray i Japan. Na izany dia vitsy ihany no mandinika ny momba io amin'ny tsirairay avy. Ao amin'ny lahatsoratra manao hoe (Mety ho loza)...
Sri Lanka: Sivana sy ny tena fanontaniana
Mpanoratra Rezwan · Tselatra · Sri Lanka
21 Febroary 2010
Iran: Miorina ny Cyber-tafika Islamika
Mpanoratra Fred Petrossian · Fitantanam-pitondrana
Matetika ny aterineto no lazaina ho sehatra ifampiresahana sy ifanakalozan-kevitra amim-pilaminana, saingy rehefa any Iran kosa, nivadika ho lasa karazana “ady an-tserasera” ny fifandirana ara-politika hany ka izay hary fitaovana matanjaka any dia mampangina ny fahalalaham-pitenenana. Indreto tononina etsy ambany ny paikady telo – nahomby na nandamòka – izay antsoinay...
Mpanoratra El Hud · Kroasia
Nandray ny fahefana amin'ny mahafiloha fahatelo, misolo ny filoha teo aloha Stjepan Mesić nahavita ny fe-potoana fiasany indroa misesy, ny zoma tamin'ny herinandro lasa teo Atoa Ivo Josipović. Namoaka lahatsoratra lavalava mandrakitra ny famantarana ivelany entin'ny filoha vaovao sy ny karazan-tsakana atrehin’ i Kroasia ny BBC mba hahatafiditra azy ho...
19 Febroary 2010
Mpanoratra Anna Gueye · Frantsa